Tag: chọrọ metric | Martech Zone
Tag: chọọ metric
Mmalite nke Nduzi na Ahịa Ahịa
Ntụkwasị obi na ikike… ha bụ naanị mkpụrụokwu abụọ dị n'etiti usoro azụmaahịa ọdịnaya, n'echiche m. Dika ulo ahia na ndi ahia na elele anya na ntaneti ka ha nyocha ahia na aka gi, ikekwe ha ekpebiela izu ahia. Ajụjụ bụ ma ha ga-azụta gị. Ahịa ọdịnaya bụ ohere maka ịkwado ntụkwasị obi na ikike ahụ n'ịntanetị. Ichie ma akụrụngwa na usoro gburugburu ọdịnaya gị